सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर कारोबार रोक्का, यस्तो छ कारण ? - नेपालबहस
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर कारोबार रोक्का, यस्तो छ कारण ?
१६ फागुन, काठमाडौं । नेप्सेले सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरकारोबार रोक्का गरेको छ । आइतबार नेप्सेले बैंकको कारोबार रोक्का गरेको हो ।
आइतबार बैंकले शेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गरेको थियाे । उक्त लाभांश प्रस्तावको सूचना नेप्सेमा कारोबार सुरु हुनु अघि नै पठाइसक्नु पर्नेमा बैंकले १२ः ३४ बजे पठाएको भन्दै नेप्सेले कारण सोध्दै कारोबार रोक्का गरेको हो ।
बैंकले शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
उक्त लाभांश प्रस्ताव गर्ने सूचना पठाउन ढिलो गरेको भन्दै नेप्सेले बैंकको कारोबार रोक्का गरेको नेप्सेका प्रवक्ता मुरारी पराजुलीले जानकारी दिए ।
‘बैंकले लाभांश प्रस्ताव सम्बन्धि सूचना १२ः३४ बजे मात्रै नेप्सेमा पठाएको छ। उनले भने, ‘सूचना दिन ढिलाई गरेकाे कारण बैंकको शेयर कारोबार रोक्का गरेको हो।’ नियम उल्लघंन गरेका कारण कारोबार रोक्का गरि स्पष्टिकरण मागेको पराजुलीले बताए ।
तनहुँको देवघाटमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय भवन ७ दिन पहिले
सरकारले चीनबाट २० हजार खाली सिलिन्डर ल्याउने २ हप्ता पहिले
थिमिमा गमला बेच्न हिँडेका ज्येष्ठ नागरिक १ हप्ता पहिले
शुक्रबार मौसम बदली रहने ३ हप्ता पहिले
कन्सुलर सेवा विभागमा लिखत प्रमाणीकरणको नयाँ व्यवस्था ३ हप्ता पहिले
वी च्याट र अली पेलेकाे नेपालमा वैधानिक रुपमा कारोबार २ वर्ष पहिले
सरकारी समाचार बहिष्कार गरे कसो होला ? २ वर्ष पहिले
सुदूरपश्चिमका सात स्थानमा स्वचालित मौसम मापन केन्द्र ८ महिना पहिले
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक संचालनमा आएको १६ वर्ष पुरा ७ महिना पहिले